Holika Holika Aloe Soothing Gel 99% 250ml – SUNNY eSTORE
Holika Holika Aloe Soothing Gel 99% 2...
Holika Holika Aloe Soothing Gel 99% 250ml
Holika HolikaSKU: 8806334370435
သဘာဝရှားစောင်လပတ်စစ်စစ် 99% ပါဝင်တာကြောင့် ရာသီဥတုမရွေး အသက်ရွယ်မရွေးအားလုံးသုံးလို့ရပြီး Aloe gel တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ခေါင်းစ ခြေအဆုံး သုံးလို့ရသောကြောင့်အလွန်အသုံးတည့်သောကုန်ပစ္စည်း လေးဖြစ်ပါသည်။
(1) နေလောင်ထားသောအသားရေကို သက်သာစေပါသည်။
(4) ညစ်နွမ်းနေသောအသားရေ ပြန်လည်ကြည်လင်စိုပြေလာစေပါသည်။
(5) မိတ်ကပ်အောက်ခံအနေဖြင့် အသုံးပြုရာ၌ မိတ်ကပ်လိမ်းရာတွင် လွယ်ကူစေပြီး မိတ်ကပ်သားညီညာစေပါသည်။
(6) အစက်ပျောက်များကို မှေးမှိန်စေပါသည်။
(7) မွဲခြောက်ပျက်စီးနေသောဆံသားကိုအစိုဓာတ် အပြည့်ဝပေးပါသည်။
(8) ဦးရေပြားမှထွက်သော ချွေး . အဆီ နှင့် ဗောက်ကြောင့် ယားယံခြင်းကိုလည်းသက်သာစေပါသည်။
ဒါ့အပြင် မိတ်ကပ် မလိမ်းခင် အောက်ခံအဖြစ် သုံးပေးခြင်းဖြင့်လည်း မိတ်ကပ် လိမ်းသည့်အခါ အဆင်ပြေချောမွေ့စေပါတယ်။အသားအရေပေါ်က သဘာဝ ရှားစောင်းလက်ပပ် အလွှာတစ်ထပ်က မိုးရာသီမှာ ကပ်ညှိပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပြဿနာကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲလေ...ဒါကြောင့် စိုထိုင်းဆများတဲ့ ခုလိုအချိန်မှာ
မှိုစွဲယားယံတာတွေကိုတားဆီးထားဖို့ သဘာဝ ရှားစောင်းလက်ပပ် ၉၉ % ထိ အပြည့်အဝ ပါဝင်တဲ့ Aloe 99% Soothing Gel လေးကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ တစ်ထပ်လိမ်းပေးလိုက်ပါ။သဘာဝရှားစောင်းလက်ပပ်ရဲ့ ပိုးမွှားရန်ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့ အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းနိုင်စွမ်းကြောင့် 💦💦 မိုးရာသီမှာလည်း Aloe 99 % Soothing Gel လေးက အားလုံးအတွက် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်နေဦးမှာပါ...😊😊နေပူတိုင်းမှာ 🌈🌈 အေးမြလှပဖို့လိမ်းကြသလို စိုထိုင်းချိန်မှာလည်း ပိုးမွှားကင်စင်လှပနေဖို့ မပျက်မကွက် လိမ်းလိုက်ပါနော်…💁
အသုံးပြုစဥ် အသားအ​ရေ နီမြန်းခြင်း ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်​ပေါ်ပါက ဆက်လက်အသုံးမပြုဘဲ အ​ရေပြားနှင့် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ ​အေးမြ​ခြောက်​သွေ့ပြီး ​နေ​ရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်မထိ​သော ​နေရာတွင်ထားပါ
The Holika Holika Aloe 99% Soothing Gel Travel Size isahandy travel version of your favorite lightweight body moisturizer. Fermented to maximize its effects, the gel promotesaclear, healthy complexion. Absorbed quickly into the skin, the non-stick formula soothes and cools whilst creatinganatural, healthy glow. Suitable for all skin types.
Includes: 1 tube of Aloe Soothing Gel 99% 250ml